Romania: Mihira Ny Noely · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Oktobra 2017 17:07 GMT
“Fahatsiarovana avy any Romania: Tamin'ny andro farany nijanonako tao [ Onesti ], maro tamin'ireo mpianatra no tonga tao amin'ny” Cancelarie “(efitranon'ny mpiasa) mba hihira ireo hiran'ny noely ho an'ny mpampianatra. Tsy nieritreritra mihitsy aho hoe efa niomana ny hanao izany izy ireo, tena fahatsiarovana mahafinaritra tsy hay hadinoina 🙂 “- avy amin'i L-plate big cheese
Lasa mpikambana vaovao ao amin'ny Vondrona Eoropeana tamin'ny 1 Janoary 2007 i Romania sy Bolgaria.
Toy izao no nosoratan'ny mpisera Flickr, L-plate big cheese momba an'i Romania ao amin'ny teny fampidirany ao amin'ny andian-tsarin'i Romania :
Izy no tany iray izay toa manana ny zava-drehetra. Ary toa semban-drahon'ny fandrosoan'ity taonjato ity sy ny taonjato farany ny ankamaroan'ilay zava-drehetra. Ankehitriny, tsy voatery midika izany fa rava i Romania, fa ny mifanohitra amin'izany. Tantaran'ny lasa vao haingana sy ny lasa fahiny ny endritaniny, rava tamin'ny faravodilanitra iray avokoa izay rehetra izany .